नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : मुटु छुने वास्तविक तीन कथाहरु तपाईंका लागि : धन्यवाद बिद्या, धन्यवाद हेर्ने कथा टिम !
मुटु छुने वास्तविक तीन कथाहरु तपाईंका लागि : धन्यवाद बिद्या, धन्यवाद हेर्ने कथा टिम !
यो म्याग्दीको दोबा गाउँ हो । पुरानो मगर बस्ति । हिमाल हाँसिरहन्छ । अनि हिमाल जस्तै हाँसिरहन्छन् नेत्र दाइ । न्यानो माैसममा भेडा धपाउँदै हिमालको जरासम्म पुग्ने नेत्र दाइ जाडो लागेपछि उँधो झर्छन् । यसरी भेडी गोठ सार्दै उँधौली उँभौली गर्न लागेको ३० वर्ष बितिसकेछ । कैलालीका ठग्गु चौधरी र उनकी ३ वर्षे छोरीको कथा एकादेशमा धनुषा जिल्लाको झिँजा भन्ने गाउँमा डाँकाहरु बस्ने गर्थे । माधव पासवान र राजलाल पासवानहरु उ बेलाका कुख्यात डाँकु थिए । उनीहरु टाढा टाढासम्म डकैती गर्न जान्थे र परिवार पाल्थे ।